Deuteronomium 24 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
24 “Sɛ ɔbarima ware ɔbea na ohu sɛ ɔbea no ayɛ biribi a enye ma enti ɔmpɛ no bio+ a, ɛnde ɔnkyerɛw awaregyae krataa+ nhyɛ ɔbea no nsam na ɔmma omfi ne fie nkɔ.+ 2 Omfi fie hɔ nkɔware ɔbarima foforo.+ 3 Na sɛ ɔbarima a ɔto so abien no nso ani nnye no ho na ɔkyerɛw awaregyae krataa de hyɛ ne nsam pam no fi ne fie, anaa sɛ ɔbarima no wu a, 4 ne kunu a odi kan a ɔpam no no ntumi nware no bio bere a ɔbea no ho agu fĩ no,+ efisɛ Yehowa kyi nneyɛe a ɛte saa. Enti hwɛ na woamma bɔne amma asase a Yehowa wo Nyankopɔn de ama wo no so. 5 “Sɛ ɔbarima ware foforo a,+ ɔnnkɔ sraadi, na ɔnnyɛ adwuma foforo biara nso. Ɔntena fie afe na ɔmma ne yere a wafa no no ani nnye.+ 6 “Obiara nnnye owiyammo anaa ɔbo a ɛda so no awowa.+ Sɛ ɔyɛ saa a, ɛyɛ ɔkra na wagye no awowa no. 7 “Sɛ wohu sɛ obi akyere ne nuanom Israelfo no bi* asie+ na ɔne no di wɔ atirimɔden so na ɔtɔn no a,+ ɛsɛ sɛ nea wakyere ne nua asie no wu. Yɛ saa fa yi adebɔne fi wo mfinimfini.+ 8 “Hwɛ wo ho yiye wɔ kwata ho,+ na yɛ nea Lewifo asɔfo no bɛkyerɛ mo nyinaa.+ Munni nea maka akyerɛ wɔn no nyinaa so pɛpɛɛpɛ.+ 9 Kae nea Yehowa wo Nyankopɔn de yɛɛ Miriam wɔ kwan so, bere a mufi Egypt reba no.+ 10 “Sɛ wobɔ wo yɔnko bosea a,+ nkɔ ne fie nkogye nea ɔde asi awowa no.+ 11 Gyina abɔnten ma nea woabɔ no bosea no nkɔfa nea ɔde asi awowa no mmrɛ wo wɔ abɔnten hɔ. 12 Nanso sɛ onii no ho akyere no a, hwɛ na woamfa nea ɔde asi awowa no anto wo ho amma ade ankye so.+ 13 Owia kɔtɔ ara pɛ a, san fa nea ɔde sii awowa no kɔma no+ na ɔmfa ne ntama nna+ na onhyira wo.+ Na Yehowa wo Nyankopɔn nso bebu no trenee ama wo.+ 14 “Nsisi ɔpaani hiani a ne ho akyere no; wo nua oo, ɔhɔho a ɔte w’asase so wɔ wo kurom oo, nsisi no.+ 15 Tua no ka da no ara,+ na mma owia nnkɔtɔ so efisɛ ne ho akyere no, na n’akatua no ara ne ne kra anidaso. Woanyɛ saa na osu frɛ Yehowa+ a, ɛbɛdan bɔne ama wo.+ 16 “Sɛ mma yɛ biribi a, nkum wɔn agyanom, na sɛ agyanom nso yɛ biribi a, nkum wɔn mma.+ Obiara bɔne ho na wonkum no.+ 17 “Sɛ ɔhɔho+ anaa agyanka+ de asɛm ba w’anim a, nnan atemmu ani, na nnye okunafo ntama awowa.+ 18 Kae sɛ na woyɛ akoa wɔ Egypt asase so na Yehowa wo Nyankopɔn gyee wo fii hɔ.+ Ɛno nti na mede mmara yi rema wo na woadi so. 19 “Sɛ wutwa w’afuw mu nnɔbae+ na wugyaw nnɔbae a wɔakyekyere no bi wɔ hɔ a, nsan nkɔfa. Gyaw ma ɔhɔho ne agyanka ne okunafo+ na Yehowa wo Nyankopɔn ahyira wo nsa ano adwuma nyinaa so.+ 20 “Sɛ woporow wo ngodua a, nsan nkɔfa so bio. Gyaw nea aka wɔ so no ma ɔhɔho ne agyanka ne okunafo.+ 21 “Sɛ wotew wo bobeturom aba a, nsan w’akyi nkɔtetew nea aka wɔ so no. Gyaw ma ɔhɔho ne agyanka ne okunafo. 22 Kae sɛ na woyɛ akoa wɔ Egypt asase so.+ Ɛno nti na mede mmara yi rema wo na woadi so.+
^ Nea ɛkyerɛ ankasa ne “ɔkra bi.”